Scotland esonye na Nkwekọrịta Ọha Ọha na Ọha - Geofumadas
August, 2020 Cartografia, Geospatial - GIS, innovations
Gọọmentị Scottish na Geospatial Commission ekwenyewo na ka May 19, 2020 Scotland ga-abụ akụkụ nke Nkwekorita Geospatial nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọha na-adịbeghị anya.
Nkwekọrịta mba a ga-edochi nkwekọrịta nkwekọrịta Scotland nke ugbu a (OSMA) na Greenspace Scotland. Ndị ọrụ gọọmentị Scottish, ndị nwere otu òtù OSMA 146, ga-enweta data sistemụ arụmọrụ na ahụmịhe site na PSGA.
Ha ga-esonyere ndị otu mpaghara si England na Wales iji nweta ọtụtụ usoro data nke eserese dijitalụ maka ndị Britain niile, gụnyere Adreesị na Ozi. Ndị PSGA ga-enyekwa nkwado ọrụ dịkwuo elu na ịnweta data ọhụrụ n'ọdịnihu.
PSGA ọhụrụ a na-atụ anya inye uru dị mkpa nke ga-eweta ozi iji kwado mkpebi, ịkwọ ụgbọala arụmọrụ, ma gaa n'ihu na-akwado nnyefe ọrụ ọha.
Dabere na Steve Blair, CEO nke Ordnance Survey, "Obi dị anyị ụtọ na Scotland esonyerela na PSGA na-eke nhazi mbu nke GB maka ndị ahịa gafee mpaghara ọha iji nweta data sistemụ arụmọrụ."
"Ndị PSGA na-enye ohere dị egwu maka sistemụ arụmọrụ yana ndị ahịa anyị, enwere m obi ike na ọ ga-emeghe uru mmekọrịta ọha na eze, gburugburu ebe obibi na akụ na ụba maka England, Scotland na Wales."
Albert King, Onye isi nchịkwa data gọọmentị Scottish, kwuru, sị: 'Gọọmentị Scottish na-anabata ohere ndị PSGA ọhụrụ enyere.' "Nkwekọrịta a na-eme ka a nọgide na-enwe ohere ịnweta data ndị na-akwado inye ọrụ nke ọha anyị n'oge anyị dabere na ha karịa mgbe ọ bụla."
"Ọzọkwa, ọ gbatịrị nke a iji wee nwee ọtụtụ data na ọrụ ọhụụ enwere ike iji bulie ọrụ ọha na oke na Scotland site na ime mkpebi na ịchekwa oge, ego na ndụ."
PSGA malitere n’April 1, 2020 bu n’obi ime ka ọha na eze, ụlọ ọrụ, ndị mmepe na agụmakwụkwọ wee baara ya uru. N'ime nkwekọrịta afọ iri ahụ, sistemụ arụmọrụ ga-anapụta ọgbọ nke data ọnọdụ maka Britain ma gbanwee ụzọ ndị mmadụ si abanye, kerịta ma mepụta data geospatial.
Maka ozi ndị ọzọ nleta www.os.uk/psga
Previous Post«Previous Geopois.com - Kedu ihe ọ bụ?
Next Post Echiche nke Geospatial na SuperMapNext »